Sida loo rakibo loona istcimaalo istiikarada fariimaha kujira iOS 10 (II) | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan ku sii wadeynaa Applelised sifeynta sirta dhammaan wararka in iOS 10 ay na keentay iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Gaar ahaan, shaqooyinka cusub iyo astaamaha Fariimaha, barnaamij laga cusbooneysiiyay kor ilaa hoose oo bixinaya khibrad isgaarsiineed oo cusub.
In qaybta koowaad ee qoraalkan waxaan galnay istiikarada. Waxaan si dhib leh u aragnay waxay yihiin, hawlgalkooda aasaasiga ah iyo sida loo rakibo baakado dhejis ah. Hadda ayaa ugu fiican, markaa ha moogaanin.
1 Habee istiikar kasta oo aad dirto
2 Maamul oo ka saar istiikarada
3 Iswaafajinta istiikarada
Habee istiikar kasta oo aad dirto
Waxa ugu fiican ee ku saabsan istiikarada ayaa ah in lagu dulmarin karo fariimaha qoraalka soo socda, sawirada, faylasha GIF, "istiikarada" laftooda, ama kuwa kale. Iyadoo taas leh waad muujin kartaa falcelin si aad uga bogato asxaabtaadu kuu soo diraan.
Istiikaarada waa in lagu dhejiyaa xumbada sheekada, si aan kala sooc lahayn looguma dhejin karo goobta farriinta. Sidoo kale, mid uun ayaad sareyn kartaa kan kale marka midka hore la diro. Maadaama aadan ku dari karin lakabyo badan oo istiikarka ah waqtiga qorista farriinta.
Si aad u dulsaarto istiikarada:
U gudub baakadka istiikarka ah ee aad rabto inaad isticmaasho.
Xulo midkood laakiin, halkii aad ka taaban lahayd, ugu jiido xumbada fariinta halka aad rabto inaad dhigto. Fudud sidan.
Waxaad ku dhejin kartaa istiikarka inta aad rabto sawir ama warqad ku dheg ah. Marka wadajir waad qurxin kartaa isla sawirkii la soo diray, tusaale ahaan.
Sidoo kale waa macquul xajmi oo wareeji booska istiikarada. Tani, mararka qaarkood, waxay u oggolaaneysaa falcelisyo kala duwan ama liddi ah in lagu gudbiyo istiikarka laftiisa.
Si loo sameeyo istiikarka ka weyn ama ka yar, intaad u jiidayso farriinta si aad meel ugu dhigto, far kale saar shaashadda oo isticmaal tilmaamidda qanjaruufo inuu ballaadho ama burburo.
Haddii aad rabto rog warqad, si isku mid ah ayaad u samayn kartaa Markaad xajisid istiikarka shaashadda dusheeda, laakiin kahor intaadan sii deynin, isticmaal laba farood si aad u rogtid oo aad u beddesho jihada. Laakiin xusuusnow, mar alla markii aad sii deyso, mar dambe awood uma yeelan doontid inaad wax ka beddesho, markaa iska jir.
Maamul oo ka saar istiikarada
Si aad u maamusho istiikarada, waxaad isticmaali kartaa tilmaamo kala duwan. Hal taabasho ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashad buuxda, sida haddii aad isticmaasho 3D Touch oo ku saabsan iPhone 6s iyo ka dib.
Haddii aad saxafad dheer ku sameyso istiikarka, xulashooyinka kuu oggolaanaya inaad gudbiso falcelin ayaa furan, iyo sidoo kale xulashooyinka maareynta. Liiskan ayaa kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo xirmada istiikarka ah App Store, haddii aadan horey u rakibin, sidoo kale wuxuu kuu oggolaanayaa inaad tirtirto istiikarada is dul saaran.
Saxafad dheer ku samee istiikarka.
Xulo xulashada "Dheeraad". Dhammaan istiikarada lagu dhajiyay sawir la siiyay, farriin, ama istiikarka hore ayaa la soo bandhigi doonaa.
Calaamada aad rabto inaad tirtirto, bidix u bood oo dooro "Delete." Istiikarka ayaa lagaa saarayaa qalabkaaga iyo aaladda qofka aad u dirtay, oo hadda waad ku dari kartaa istiikarada dheeri ah.
Istiikaarada ayaa kaliya la jaan qaadaya macruufka 10 iyo macOS Sierra. Sidaa darteed, wixii diraya xiriirada adoo adeegsanaya noocyadii hore si fiican looma soo bandhigi doono.
Waqtigan xaadirka ah, Fariimaha cusub ee App Messages kuma jiraan noocyo badan oo istiikaradahan ah, si kastaba ha noqotee, tani hadda way bilaabatay, horumariyayaal badan ayaa horay u joogay.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato farriimaha cusub iyo astaamaha iOS 10:
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo rakibo loona istcimaalo istiikarada fariimaha kujira iOS 10 (II)
Ma la joogaa xilligii la cusboonaysiin lahaa Ipadkaaga? Ikhtiyaarro noocee ah ayaa jira?